(Kugcine ukubuyekezwa On: 20/05/2020)
Noma yisiphi isimo lapho ukudla noma iziphuzo zilethwa khona etafuleni kuvame ukudinga ithiphu. Inani lincike ohlotsheni lokudlela olujabulelayo. Inqubo ejwayelekile yokufaka imali eYurophu ukushiya izikweletu ezingama-Euro amabili noma amabili ngaphezulu kwenani lesibambiso uma kuyiziphuzo eziyisiyingi kodwa kungabikho ukudla oku-odwayo. Ukudla okugcwele endaweni ehlala phansi kuhlukile. Esimweni esinjalo, a few Euro’s per person is usually sufficient. Five-star restaurants across Europe usually include the tip in their bill. Qiniseka ukuthi ubheka lokhu njengoba asikho isidingo sokushiya enye ithiphu ngaphandle kokuthi uyijabulele insiza yakho. Insizakalo enhle kwesinye isikhathi idinga enye iphuzu, ngakho-ke kulezi zimo, ungahle uhambe yonke indlela kuze kufike 15%.
Abantu abaningi bafuna ukuthola i-hairdo entsha entsha, noma ukubhucungwa umzimba ngenkathi ngiseholidini. Ngenhlanhla uzothola ama-spa nama-stylists kulo lonke elaseYurophu, imvamisa cishe kuwo wonke amadolobha. Ukululeka, kunoma yikuphi, imvamisa cishe amaphesenti ayishumi. Uma ujabule kakhulu ngenkonzo oyitholile, ungahle uye phezulu njengoba 15%.
Amahhotela ngumbuzo ojwayelekile uma kuziwa embuzweni wokufaka i-Europe. Njengomthetho wesithupha, umuntu kufanele alandele njalo umhlahlandlela we-One Euro. Lokhu ngokuyisisekelo kusho ukuthi ushiya i-Euro eyodwa kumathiphu wenkonzo ngayinye. Uma i-bellhop noma i-porter ithwala izikhwama zakho, khona-ke i-Euro eyodwa isikhwama ngasinye yanele. Ukuhlanza indlu kufanele kuthole i-Euro ngosuku. Ukululeka i-concierge yakho kungokuthanda kwakho, kepha kufanele kuncike ezingeni lenkonzo oyitholile. Uma badlulele ngaphezulu nangaphezulu ukuze ungahlala ukhumbuleka futhi ujabulise, khona-ke kufanelekile ukuthathwa kwesilinganiso sesihlanu kuya kwesishumi se-Euro noma ngisho nangaphezulu.
Ama-Taxi kanye ne-Ubers ayingxenye yangaphakathi yokujikeleza iYurophu. Lapho ukhetha ukuthi uzokwengeza ini, kungcono ukukhumbula ukuthi umshayeli ukhokhelwa kanjani. ngokuvamile, Nokho, ithiphu emibili ye-Euro ngetekisi elifushane noma ukugibela i-Uber kufanelekile. Izinhlelo zokusebenza ezinjenge-Uber zikuvumela ukuthi uciphise umshayeli ngogesi, ngenkathi amatekisi e-metered azodinga imali. Ukunikeza usizo eYurophu ngenkathi usohambweni kuyafana nokuthola izikhala noma ezindaweni zokudlela. Khumbula ukuthi akudingeki ngaso sonke isikhathi, but often appreciated. Ukubhuka amathikithi akho wesitimela yakho uhambo European ilula futhi isempumalanga inewebhusayithi ethi The Eshibhile kunazo Zonke Amathikithi Esitimela Emhlabeni.
Ukuthi kungubuyisele emuva kwimvelaphi yabo yamaViking noma nje ukulula okulula, la mazwe akuthandayo ukuthi ungafiki nakancane. Izindawo zokudlela eziningi kanye nezinsizakalo zizoba nethiphu efakiwe kumbhili. Kusafanelekile ukukhokhisa inkokhiso ukuya kwi-Euro eseduze esikhundleni sendawo noma ngemali noma ngekhadi lesikweletu.
Shiya okungenani a 5% ithiphu, ukheshi ngamaseva, even if the bill includes gratuity. Cash is always king in most European countries, ne-Austria akuhlukile.
Baziwa ngobungani babo, zombili lezi zizwe zizophatha izikhwama zakho ngenjabulo. Ukuthola izeluleko kubathwali bemithwalo akubalulekile, futhi ngokuvamile akulindelekile. Ukuba nomusa bese uthi ngiyabonga ngenhlonipho, Nokho, kulindeleke. Uma ufisa ukuthola insizakalo efanayo ngokuzayo kusuka kumgcini wakho wezindlu, qiniseka ukubazisa kahle.
Iseluleko esihle kakhulu sokuthola usizo eYurophu ukwenza umsebenzi wesikole. Funda konke mayelana nezwe, noma amazwe ohlela ukuwavakashela. khumbula lokho uhambo lwesitimela luvame ukukuthatha emazweni amaningi ukuze ukwazi ukuma lapho. Letha njalo ukheshi, zombili izinhlamvu zemali, namanothi ambalwa ukuze afinyelele imali. Uma ungaqiniseki ngezinqubomgomo, Namathela emthethweni wamaphesenti ayishumi zokudlela, and the one Euro rule for everything else.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Umhlahlandlela We-Ultimate To Tipping eYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/guide-tipping-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#yokudlela europetravel Ukudla TippingEurope Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traveltips Vacations